Qoraallada Ardayda - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Si loo sahlo, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in CEC ay la shaqeysay Dejino si loo socodsiiyo codsiyada qoraalka ardayda. Dugsiyada CEC waxaa loo ogol yahay oo keliya inay diraan diiwaanada dugsiga sare ee ardayda, oo ay ku jiraan duubitaanka dhibcaha kulleejyada ee koorsooyinka la bixiyay oo lagu dhammaystiray CEC. Haddii aad u baahan tahay Qoraal Ardayga CEC ah, si fudud u riix magaca dugsiga CEC si aad u hesho Dejino bogga internetka ee iskuulkaas.
Codsiyada Qoraalka Kuleejka
Iskuulada CEC ma haystaan ​​galalka qoraalada kuliyada. Haddii aad qaadatay koorsooyin kulleejo ah inta aad ka diiwaangashan tahay CEC waxaad u baahan doontaa inaad ka codsato qoraalka rasmiga ah ee kulliyadda koorsooyinkaaga la soo saaray.
Xiriirinta diiwaanada codsiyada websaydhka qaar ka mid ah Wada-hawlgalayaasha Kulleejka ee la Aqoonsaday ayaa hoos ku taxan si loogu sahlo
Ujeedada Kulleejada Bulshada
Kuliyada Bulshada ee Arapahoe
Koleejka Beesha ee Denver
Kuliyada Bulshada ee Kulmiya
Jaamacadda Gobolka Metropolitan ee Denver
Kulliyadda Farsamada (Pickens Technical College)
Pikes Community College Pikes Pikes
Red Rocks College Community
Jaamacadda Colorado Colorado Springs
Jaamacadda Colorado Denver
Macluumaad Qoraal Caawineed
Macluumaadka Farrinta & Dalbashada Su'aalaha
Waa maxay Xaraashka?
Parchment wuxuu la shaqeeyaa hay'adaha iyo shirkadaha adduunka oo dhan ka caawiya dadka ururinta, dhiirrigelinta iyo la wadaagga aqoonsigooda waxbarasho qaabab fudud oo ammaan ah. Bixinta Software-ka-Adeeg ahaan shirkadda, Isweydaarsiga Parchment wuxuu awood u siinayaa is-weydaarsiga aaminka ah, malaayiinta qoraallada elektaroonigga ah iyo diiwaannada kale ee ardayda dhexdooda ku dhowaad 9,000 dugsiyo iyo jaamacado, lix wakaaladood oo waxbarashada gobolka ah, iyo boqollaal kun oo qof.
Sidee ayuu e-Transcript u shaqeeyaa?
Ardayga machad kaqeybgalaya wuxuu adeegsadaa iskuxirka websaydhka dugsiga, wuxuu galiyaa macluumaadka la aqoonsan karo, wuxuu doortaa erayga sirta ah wuxuuna doortaa meesha uu u dirayo qoraalka. Codsiyadaan transcript-ka ah waxaa si elektaroonik ah loogu heli karaa Diiwaanhayaha hay'adda diraya, kaasoo oggolaada codsiyada isla markaana si elektaroonig ah ugu gudbiya diiwaanada transcript ardayda. Parchment wuxuu markaa keenaa qoraal rasmi ah, elektaroonig ahaan, iyadoo loo eegayo doorbidista hay'adda helitaanka. Ardaygu wuxuu helayaa xaqiijin iimayl ah marka qoraalka la soo diro, iyo haddii si elektaroonig ah loo geeyo, markii la helo sidoo kale.
Adeegga Isweydaarsiga Dareenka FERPA ma waafaqsan yahay?
Haa. Qoraallada waxaa lagu soo diraa adeegga Isweydaarsiga Dareenka iyadoo la adeegsanayo qaab waafaqsan Sharciga Xuquuqda Waxbarashada Qoyska iyo Qarsoodiga (FERPA).
Eegista Dareenka & Tilmaamaha Bilowga Degdegga ah
Xarafka - Eeg Tilmaamaha Qoraalka Aan Rasmiga Ahayn
Faaruuq - Tilmaamaha Bilowga Degdegga ah
Diritaanka dhibcaha ACT ama SAT
Dugsiyada CEC ma helaan marin rasmi ah dhibcaha imtixaanka ACT ama SAT. Haddii mid ka mid ah buundooyinkaas laga codsanayo kulliyad ama machad, fadlan isticmaal xiriiriyeyaasha hoose si aad u hesho hababka lagu bixiyo websaydhada 'ACT' ama 'SAT' si aad u codsato diiwaanadaada in la diro.
ACT Xiriirinta Websaydhka
Xiriirka Shabakada SAT